Dyson 360 आँखा वैक्यूम समीक्षा - समाचार नियम
Dyson 360 आँखा वैक्यूम समीक्षा
यो Dyson 360 आँखा सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन रोबोट निर्वात उपलब्ध छ. यो केवल सबै अरूलाई भन्दा सफाई मा राम्रो छ, तर यो पनि यसको downsides छ.
ब्रिटिश क्लीनर निर्माता पहिलो रोबोट निर्वात लागि प्रतीक्षा लायक थियो, तर धेरै लागत, सिढी नहीं गर्न सक्छन् र अहिले राम्रो उपलब्ध हुनुको बावजुद सिद्ध छ
शीर्षक यो लेख “Dyson 360 आँखा निर्वात समीक्षा: बेकारी कि रोबोट (तर राम्रो तरिकामा)” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, मंगलवार 9th अगस्ट theguardian.com लागि 2016 06.00 UTC
Dyson गरेको 360 आँखा रोबोट भ्याकुम क्लिनर अन्तमा बेलायत जापान मा एक व्यापक परीक्षण पछि जारी गरिएको छ र यो हुन राम्रो उपलब्ध दाबी. बजार अग्रणी विरुद्ध यो कसरी स्ट्याग गर्छ Roomba - र यो साँच्चै लायक खरीद छ?
हेर्नु, आकार र डक
डकमा एक सरल छ, रोबोट नै सम्म चार्ज गर्न ड्राइव जो मा एक क्रोम सम्पर्क छोपेको खुट्टा संग सेतो प्यानल. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो 360 आँखा दुवै अन्य रोबोट vacuums भन्दा सानो र taller छ. यो व्यास 23cm छ, जो आफ्नो ठूलो प्रतियोगी भन्दा 12cm कम छ, को iRobot Roomba 900 श्रृंखला, तर यो पनि 12cm अग्लो छ, जो यो 3cm को Roomba भन्दा taller बनाउँछ.
डक, यसलाई आफ्नो अधिकांश समय बिताउनुहुन्छ रूपमा, को 360 आँखा व्यापक प्रतियोगिहरु भन्दा एकदम कम तल्ला ठाउँ लिन्छ, जो यो बाँच्न सजिलो साथ, र यसको सानो व्यास अर्थ यो पनि मा र तंग अंतराल को प्राप्त गर्न सक्छौं. उदाहरणका लागि, को 360 तपाईं निर्धारित-सफा बिहान मा टेबल माथि कुर्सियों स्ट्याग छैन त आँखा र प्रतियोगिहरु भन्दा राम्रो तालिका र कुर्सी खुट्टा बाहिर बुनाई गर्न सक्नुहुन्छ.
आँखा यसलाई आफ्नो वातावरण को 360-डिग्री दृश्य दिन शीर्ष गर्व बस्छन, तर यो रोबोट शरीर भन्दा छोटो छन् कुराहरू देख्न सक्छन्. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
रोबोट को शीर्ष 360-डिग्री क्यामेरा छ, जो यो प्रत्येक समय बाहिर नक्शा आफ्नो कोठा र सबै भन्दा राम्रो प्लट प्रयोग, सबैभन्दा कुशल सफाई बाटो. रोबोट कब्जा दृश्य कहिल्यै रोबोट छोड्दा.
डकमा रोबोट चार्ज गर्न ड्राइव मा जो एक सरल सेतो Chrome स्ट्रिप्स संग अडान छ. दुई कालो र सेतो चेकर वर्गहरूको रोबोट डकमा हेर्न र यसलाई फिर्ता आउन यो एक शीर्ष अप आवश्यक जब मदत, जो यसलाई आफ्नो एक भन्दा बढी कोठा गरिरहेको यदि मध्य-सफा गर्नेछ. अतिरिक्त केबल शक्ति एडप्टर भण्डार गर्न सकिन्छ, यसलाई देखि राखन रोबोट अप चूसा रही.
निर्धारण र नियन्त्रण
एन्ड्रोइड र आइओएस लागि Dyson लिंक अनुप्रयोग रिमोट नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ, निर्धारण र गल्तीलाई को निदान, एक-गर्न-सजिलो प्रयोग तरिकामा. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो 360 आँखा Dyson गरेको जडान उत्पादनहरु को पहिलो लाइन को छ, को संग Dyson कूल लिंक, जबकि अर्थ यसको सेटिङ र नियन्त्रण भन्दा एन्ड्रोइड र आइओएस उपकरणहरू लागि Dyson लिंक अनुप्रयोगमा offloaded गरिएको छ.
तपाईं अझै माथि एकल बटन प्रयोग गरेर रोबोट सफाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर सफाई पटक तालिका तपाईँले अनुप्रयोग आवश्यक. एकपटक स्थापित र आफ्नो वाइफाइ नेटवर्कमा जडान - यो यो ठीक जडान गर्न तीन प्रयासहरू गरे मेरो (admittedly एकदम जटिल) बहु-नेटवर्क सेट अप - अनुप्रयोगलाई कहीं देखि रोबोट नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, केवल घरमा.
निर्धारण रूपमा हरेक दिन ट्याप रूपमा सजिलो छ, वा बारम्बार समय र हप्ताको दिन उठाएर र यो सेट गर्न, कि हैन. अनुप्रयोग त तपाईं सफा निर्धारित एक को अगाडि सूचित गर्न सक्छन् र एक पटक रोबोट समाप्त भएको छ. यो पनि त तपाईं सोध्नु गर्न सक्छन् जहाँ रोबोट भएको छ नक्सा यो उपलब्ध तल्ला ठाउँ throughly ढाकिएको छ देखाउँछ, जो reassuring छ.
त्यहाँ अनुप्रयोगमा निर्मित ठोस उत्पादन पुस्तिका सुविधाहरू मार्फत चल्छ भन्ने छ, जो बिट के गर्छ, मर्मतका र समस्या निवारण. Dyson आफ्नो घरमा राउन्ड आउन र तपाईंलाई यो स्थापना गर्न एक विकल्प पनि छ.
यो ब्रश पट्टी रोबोट पूरा चौडाइ समेट्छ, कमला ट्रयाक गर्दा यो पाङ्ग्रा भन्दा बढी एक बिट कर्षण दिन. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
त्यहाँ पक्कै पनि Dyson छ 360 आँखा सफाई रोबोट हाल उपलब्ध सबैभन्दा राम्ररी छ. यो पूर्ण-चौडाइ ब्रश पट्टी हो र ठोस चूषण एक Roomba भन्दा एकदम अधिक माटो र राम्रो धूलो माथि उठयो. Dyson यसको दर्शन प्रणाली पनि कम खर्चिलो टक्कर-संवेदन मोडेल भन्दा धेरै अधिक कुशल छ दाबी, कि वस्तुहरु मा बम्प द्वारा एक कोठा नक्शा.
यसको किनारा-सफाई प्रदर्शन पनि छ कि छेउमा कताई ब्रश भर सबैभन्दा अरूलाई भन्दा राम्रो छ, तर यो सबै कुरा प्राप्त छैन. हरेक अन्य रोबोट निर्वात हाल उपलब्ध जस्तै, को 360 आँखा काम को थोक गर्न डिजाइन गरिएको छ, हरेक दिन सफा र माटो को शीर्ष मा राख्न निर्माण अप. तपाईं अझै पनि सिढी र भागहरु सफा गर्न अर्को निर्वात आवश्यक हुनेछ कि रोबोट पुग्न सक्दैन.
यसलाई हेर्ने सफा निराश बनाउन सक्छ. यो 360 आँखा5मिनेट वर्गहरूको मा एक वर्ग सर्पिल ढाँचा निम्नानुसार. यो obstructed छ सम्म यो सफा र त्यसपछि वर्ग भर्न आय अर्को वर्ग मा बढ अघि. यदि स्पेस अनुमति छैन, यस्तो उदाहरणका लागि galley भान्सा को लम्बाइ रूपमा, एक थप तार्किक Zig-ZAG ढाँचा जस्तो देखिन्छ के स्विच हुनेछ.
बिन बाहिर लिएर र यो खाली छिटो र सजिलो छ, तर यो एउटा सानो बिन छ र तपाईं विशेष फोहोर गलैँचा छ भने यो मध्य-रन खाली गर्न सक्छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
रोबोट कमला ट्रयाक छ, बरु पाङ्ग्रा भन्दा, जो मद्दत गर्छ यस्तो बाक्लो गलैँचाहरु र ढोका गर्न साना ओठ रूपमा भन्दा सानो humps प्राप्त. दर्शन सिस्टम रोक्छ को 360 ठूलो कुरा र पर्खाल मा दुर्घटनाग्रस्त देखि आँखा, तर यो अझै पनि कुर्सी खुट्टा र अन्य पातलो वा सानो वस्तुहरु प्रहार.
शरीर को सारा शीर्ष प्रभावहरु लागि एक बफर रूपमा फेरबदल, तपाईं आशा सक्छ भन्दा जो थप हुन्छ, तर धेरै विपरीत अन्य टक्कर-शैली क्लीनर, यसलाई बन्द गर्दैन र एक सतह विरुद्ध नै रगडना र यति कुनै पनि नाजुक finishes वा तिमी हुन सक्छ उपकरण चिनो छैन.
पछि बारेमा 45 चार्ज गर्न यसको आधार स्टेशन गर्न रोबोट लाभ सफाई को मिनेट, जो लिन्छ बस अन्तर्गत2र आधा घण्टा. यो त बाहिर जाने र यो एक पल्ट यो शुल्क नसक्ने थिएन बिट समाप्त हुनेछ. यो चूषण र ब्रश पट्टी जब यो पनि र आधार स्टेशन बाट ड्राइभिङ गर्नुपर्छ बन्द, र पनि बेला यो विराम र वस्तुहरु वरिपरि तरिका बाहिर काम गर्दछ.
रोबोट एक औसत शय्या अन्तर्गत फिट गर्न शायद पर्याप्त छोटो छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो 360 आँखा vacuums को quietest छैन र यो तपाईं नजिकै सफाई सुरु यदि तपाईं टेलिभिजन सुनेपछि रोक्न पर्याप्त ठूलो छ, तर यो सबै भन्दा अरूलाई भन्दा बढी सुखद पिच मा पनि छ. Dyson यसलाई आफ्नो वैक्यूम क्लीनर को ध्वनि अधिक सहने योग्य हुन धुनों कसरी एक ठूलो सम्झौता बनाउँछ र यसलाई साँच्चै फरक पार्छ. सामान्यतया तपाईंलाई हुन छैन यो सफाई गरिरहेको छ, जबकि, तथापि.
पछाडि एक पप-बन्द प्यानल पोस्ट-मोटर फिल्टर प्रकट, जबकि पूर्व-मोटर फिल्टर बिन पछि बस्छन. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
जबकि 360 आँखा को सफाई गर्न र आफै चार्ज राख्न हुनेछ, त्यहाँ मर्मतका को एक सानो बिट आवश्यक छ. एक महिना एक पटक तपाईं पूर्व र पोस्ट-मोटर फिल्टर धुन छ, जो छोड्ने सजिलो – पछाडि एक र बिन नजिकै एक – एक ट्याप सञ्चालन र लागि ड्राई गरौं 24 घण्टा.
को 0.33L बिन खाली गर्न धेरै सजिलो छ. बस माथि जारी बटन थिच्नुहोस्, यसलाई पुल, ढक्कन उचाल्न र बिन मा मिलाउ. एक 30 बढीमा दोस्रो काम.
को ब्रश पट्टी देखि obstructions खाली सरल छ. यो unscrewed र छेउमा हटाइएको गर्न सकिन्छ, तर म फेला म कहिल्यै वास्तवमा त्यसो गर्न आवश्यक, पनि जुत्ता laces लागि यो खाएका थिए.
एक सफाई एक मानिन्छ सफा गलैँचा मा चलान. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यसलाई इन्टरनेटमा जडान अनुपलब्ध भए, अनुसूची एक बिट गर्न मारा र मिस देखिन्छ
यो एक अन गर्न बाध्य छ भने यो एकदम सजिलै साना ओठ वा वस्तुहरू मा फँस प्राप्त गर्न सक्छन्
यो एक मानिन्छ सफा गलैँचा देखि झिकेर माटो को मात्रा एकदम तर्साउने थियो
यो 360 आँखा केही अरूलाई सफा एक perceivable स्तर कायम राख्न रूपमा बारम्बार चलाउन आवश्यक छैन
यसलाई के छौँ 20 अन्तर्गत फर्नीचर को विभिन्न बिट र अवरोध संग गलैँचा को वर्ग मीटर 30 दोस्रो शुल्क जरूरत बिना मिनेट
यो सफाई सुरु गर्न सक्षम हुन डक देखि एक मीटर या त बारेमा ड्राइव गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ, जो यो एक सभ्य खुला ठाउँ गर्न निःशुल्क बाटो छ छ मतलब
यो रूपमा छैन अन्य रोबोट vacuums रूपमा प्यारो
यो Dyson 360 आँखा लागत £ 800. तुलना लागि, iRobot गरेको Roomba 980 दृश्य नेभिगेसन पनि £ 800 लागत, जबकि टक्कर-नेभिगेसन रोबोट vacuums वरिपरि £ 150 र माथि मा सुरु.
यो Dyson 360 आँखा सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन रोबोट निर्वात उपलब्ध छ. यो केवल सबै अरूलाई भन्दा सफाई मा राम्रो छ, तर यो पनि यसको downsides छ. यो एक Roomba रूपमा धेरै कुराहरू अन्तर्गत प्राप्त गर्न सक्दैन, यो अझै पनि पातलो कुराहरू मा धक्का र यसलाई अझै पनि सबै सफा गर्न सक्दैन, यो तपाईं स्वामित्व गर्न आवश्यक मात्र निर्वात छैन अर्थ.
यसको सानो पदचाप र तालिका र कुर्सी खुट्टा वरिपरि प्राप्त गर्न यसको क्षमता मा एक फरक पार्छ, जब यसको डकमा बसे र यसलाई कम स्थान लिन्छ, जो यो एक धेरै बाँच्न सजिलो संग cramped फ्लैट्स र terraces मा बनाउँछ.
रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक हप्ताको दैनिक वा कम से कम धेरै पटक निर्वात डिजाइन, जो सफाई शक्ति बाहिर-र-बाहिर कुरा धेरै गर्दैन भन्ने हो. नियमित सफाई यसलाई विशेष खराब स्तर प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ कहिल्यै, र तपाईं केहि फैल यदि तपाईं त त्यहाँ एक निर्वात बाहिर प्राप्त र यसलाई खाली भन्दा रोबोट लागि यो छोड्न थप चाहाने.
त्यसैले तपाईं एक कम सक्षम रोबोट काम बस साथै सक्ने तर्क सक्छ, तर 360 आँखा पनि केही अरूलाई सफा एक perceivable स्तर कायम राख्न रूपमा बारम्बार चलाउन आवश्यक छैन, यो यसको पहिलो कूचो लगाउनु थप हुन्छ ठीक किनभने. यसलाई विभिन्न दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा ढाक्न फर्श बीच स्थानान्तरण गर्न सजिलो पनि छ.
यो एक धेरै लागत, यो सही छैन र यो पक्कै पनि सबैका लागि एक अवश्य-किन्न छ. तर यो सबै भन्दा राम्रो रोबोट निर्वात अहिले छ.
पेशेवरों: तंग अंतराल मा फिट, प्रत्येक रन मा राम्रो सफा, अझ रमाइलो हल्ला बनाउँछ, राम्रो किनारा सफाई, सजिलो मर्मतका, राम्रो अनुप्रयोग, सरल निर्धारण
नकारात्मक: धेरै फर्नीचर अन्तर्गत प्राप्त गर्न सक्दैन, महंगा, आफ्नो मात्र निर्वात हुन सक्दैन, सफाई पुस-बटन परे भन्दा सुविधाहरू लागि इन्टरनेट पहुँच आवश्यक, सबै रोबोट vacuums जस्तै फँस प्राप्त गर्न सक्छन्
यो Dyson 360 को Roomba भन्दा सानो व्यास छ 880 यहाँ तस्विरमा, तर taller छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
iRobot Roomba 880 समीक्षा: लगभग एक घरपालुवा जनावर एक रोबोट भ्याकुम क्लिनर
Dyson V8 निरपेक्ष समीक्षा: सोझो गर्न अन्तमा एक ताररहित वैकल्पिक
सर्वश्रेष्ठ वैक्यूम क्लीनर? यसलाई चूसना र हेर्न
लेख, Dyson लिमिटेड, ग्याजेटहरू, समीक्षा, रोबोट, शमूएल गिब्स, प्रविधि
← Samsung खुलासा किया QuantcastAZONANO ग्यालेक्सी नोट7Phablet तपाईं आँखा अनलक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं यो छ विचार रूपमा सटीक रूपमा तपाईंको मेमोरी छ? →